२० शानदार प्रेरणादायक पाउलो कोएल्हो उद्धरण - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जनवरी 14, 2020 | उद्धरण, प्रेरणादायक उद्धरण र भनाइहरू |0|
1 प्रेरणादायक पाउलो कोएल्हो उद्धरण
1.1 हाम्रो शीर्ष Paul पाउलो कोएल्हो उद्धरण
1.2 Paul अल्लोमिस्टबाट पाउलो कोएल्हो उद्धरण
1.3 लोकप्रिय पाउलो कोएल्हो उद्धरण
प्रेरणादायक पाउलो कोएल्हो उद्धरण
पाउलो कोल्हो ब्राजिलका लेखक, पूर्व अभिनेता र गीतकार हुन् जो अहिले स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा बस्छन्।
ऊ उत्तम बेचेको छ आत्म-विकास लेखक, सबैभन्दा बढी उनको आत्मकथा उपन्यास The Alchemist को लागी प्रख्यात।
निम्न पाउलो कोइल्हो उद्धरणहरू उसको सर्वश्रेष्ठ र सबैभन्दा प्रेरणादायक उद्धरणको रूपमा मानिनेछ।
हाम्रो शीर्ष Paul पाउलो कोएल्हो उद्धरण
जब तपाइँ केहि चाहनुहुन्छ, सबै ब्रह्माण्डले तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्न मद्दतको लागि षडयन्त्र गर्दछ।
जीवन आफैलाई खोज्ने बारेमा होइन, जीवन आफैलाई बनाउने बारेमा हो।
जब गलत व्यक्तिहरूले तपाईंको जीवन छोड्दछन्, सही चीजहरू शुरू हुन्छन्।
एक दिन तपाई उठ्नुहुनेछ र तपाईले चाहानु भएको कुराहरु गर्नको लागी अब बाँकी समय हुँदैन। अब यो गर्नुहोस्।
जब तपाईं गल्ती दोहोर्याउनुहुन्छ, यो अब गल्ती हुँदैन। यो निर्णय हो।
Paul अल्लोमिस्टबाट पाउलो कोएल्हो उद्धरण
किन्न अलचेस्टर अमेजनमा
पाउलो कोएल्होको सर्वश्रेष्ठ बेच्ने उपन्यास द अल्केमिस्टलाई धेरैले यसलाई एक मानिन्छ उत्तम आत्म-सुधार पुस्तकहरू.
यहाँ Alchemist बाट6उत्तम उद्धरणहरू छन्।
व्यक्तिहरू सक्षम छन्, कुनै पनि समयमा आफ्नो जीवनमा, उनीहरूले जुन सपना देख्छन्।
सपनालाई प्राप्त गर्न असम्भव बनाउने केवल एउटा चीज छ: असफलताको डर।
जब हामी माया गर्छौं, हामी सधैँ हामी भन्दा राम्रो हुन प्रयास गर्ने प्रयास गर्छौं। हामी हामी भन्दा राम्रो हुन प्रयास गर्दा, हामी वरपर सबै कुरा पनि राम्रो हुन्छ।
यो सपना साकार हुन सक्ने सम्भावना हो जसले जीवनलाई रमाईलो बनाउँदछ।
एकलाई माया गरिन्छ किनभने एकलाई माया गरिन्छ।
जब प्रत्येक दिन अर्को दिनजस्तै हुन्छ, यो किनभने मानिसहरू राम्रा चीजहरू चिन्न असफल हुन्छन् जुन तिनीहरूको जीवनमा हरेक दिन घाम उदाउँदछन्।
लोकप्रिय पाउलो कोएल्हो उद्धरण
असम्भव केवल एक विचार हो।
यदि तपाइँलाई लाग्छ कि साहसिक खतरनाक छ, नियमित प्रयास गर्नुहोस्; यो घातक छ।
जब तपाईं के गर्न उत्साहित हुनुहुन्छ, तपाईं यो सकारात्मक उर्जा महसुस गर्नुहुन्छ। यो धेरै सरल छ।
म सामान्य र कटु भन्दा बरु पागल र खुसी हुन चाहन्छु।
जब तपाई अरूलाई हो भन्छन्, यकिन गर्नुहोस् कि तपाई आफैले आफैलाई होईन भनेर।
तपाईंसँग दुई विकल्पहरू छन्, तपाईंको दिमाग नियन्त्रण गर्न वा तपाईंको दिमागले तपाईंलाई नियन्त्रण गर्न।
केही ढोका बन्द गर्नुहोस्। गर्व, असमर्थता वा अहंकारको कारणले होईन, तर केवल किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई कतै नेतृत्व गर्दैनन्।
उपेक्षित सबै आशिष् एक श्राप हुन्छ।
जीवन सधैं सही क्षण अभिनय गर्न को लागी प्रतीक्षा को कुरा थियो।
स्पष्टीकरणको साथ तपाईंको समय खेर फालनुहोस्, मानिसहरू सुन्नुहोस् जुन उनीहरू सुन्न चाहन्छन्।
चीजहरू जहिले पनि मैले चाहेको तरिकामा हुने गर्दैन, र यो उत्तम छ कि म यसको प्रयोग गर्छु।
हामीलाई चोट पुर्‍याउने कुराले हामीलाई निको पार्छ।
सपनाहरू कुराकानी योग्य हुँदैनन्।
जीवनमा ठूलो खुशी भनेको के गर्नु हो जुन उनीहरूले भन्छन तपाईं गर्न सक्नुहुन्न।
जब हामी प्रेम खोज्न थाल्छौं, प्रेमले हामीलाई खोज्न र हामीलाई बचाउन सुरू गर्दछ।
पुस्तक अवलोकन: अलचेस्टर, यसको शक्तिशाली सरलता र प्रेरणादायी बुद्धिमा चम्किरहेको, सान्दियागो भन्ने एक अन्डालुसियाई गोठालो केटाको बारेमा छ जो आफ्नो जन्मभूमि स्पेनको मिश्री मरुभूमिमा पिरामिडमा गाडेको खजानाको खोजीमा यात्रा गर्दछन्।
बाटोमा उनले जिप्सी महिलालाई भेट्छन्, एक मानिस जसले आफूलाई राजा भन्छन्, र एक कीमियास्ट, सबैले सान्तेआगोलाई उसको खोजको दिशामा औंल्याउँछन्। कसैलाई पनि थाहा छैन यो खजाना के हो, वा यदि स्यान्टियागो मार्गमा भएका अवरोधहरूलाई पार गर्न सक्षम हुनेछ। तर सांसारिक सामानहरू फेला पार्नको लागि यात्राको सुरुवात भनेको भित्र भेटिएको खजानाको खोजीमा परिणत हुन्छ।
रमणीय, उत्तेजक र गहिरो मानवीय, स्यान्टियागोको कथा हाम्रो सपनाहरूको रूपान्तरण गर्ने शक्ति र हाम्रो हृदय सुन्ने महत्त्वको अनन्त प्रमाण हो।
पढाइ व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू प्रेरणा र प्रेरणा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग मनपर्ने पाउलो कोलोहो उद्धरण वा कुनै प्रेरणादायक उद्धरण छ जुन तपाईं हाम्रो आगन्तुकहरूसँग साझा गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई तलका टिप्पणी बाकसहरूको प्रयोग गरेर हामीलाई सूचित गर्नुहोस्।
अर्कोमोरिंगाले पुरुषमा यौन प्रदर्शन कसरी बढाउछ?
30 आत्म-अनुशासनमा प्रेरणादायक उद्धरणहरू